Abidy malagasy. Ny abidy malagasy dia abidy ampaisaina rehef
Finoana silamo eto Madagasikara
ⓘ Abidy malagasy. Ny abidy malagasy dia abidy ampaisaina rehefa manoratra amin ny fiteny malagasy. Io abidy io dia avy amin ny abidy latina, ampiasaina amin ny fa ..
Ny abidy latina na abidy romana dia abidy ahitana litera fototra miisa 26 sady afaka atao sora-baventy na sora-madinika. Litera ao aminny abidy latina no mamorona ny abidy malagasy aminizao fotoana izao. Mampiasa io abidy io hanoratany ny fiteniny ny ao Eoropa Andrefana sy Eoropa Avaratra ary Eoropa Afovoany. Mampiasa azy koa ireo firenena ivelani Eoropa indrindra ireo firenena nozanahinny Eoropeana, isanizany ny ao Amerika Avaratra sy Atsimo sy ny ao Afrika ary ny ao Oseania. Ireto avy ny litera fototra ao aminny abidy latina aminny endriny soramadinika: a - b - c - d - e - f - g - h - i ...
Ny Abidy hebreo dia fitambarana litera miisa 22 tsy ahitana zanatsoratra izay anoratana ny fîteny hebreo. Amin’ny fiteny hebreo, io abidy io dia atao hoe אָלֶף־בֵּית עִבְרִי ‬ / Alefbet Ivri na האלפבית העברי / Ha-ˈAlefbet ha-Ivri. Tsy misy ny fanavahana ny sorabaventy sy ny soramadinika. Taty aoriana vao nisy marika miendri-teboka atao hoe nikkud izay amantarana ny zanapeo. Vakina avy ankavana miankavia ny soratra hebreo. Ny abidy hebreo no nanoratana ny boky ao amin’ny Tanakh Baiboly hebreo, izany hoe izy no nanoratana ny fiteny fototry ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly. Izy koa no ...
Ny abidy dia ny fitambaranireo tarehin-tsoratra aminny tenim-pirenena tsirairay avy. Tenenintsika hoe litera ny eva iray. Ara-teôria, tokony mampiseho feo iray ny litera iray. Ary tokony manana diakritìka ny litera sàsany mba hanana stock litera raha tsy ampy ny isany.
Ny abidy samaritana dia abidy ampiasainny Samaritana hanoratany ny fiteny hebreo samaritana ary ny fiteny arabo. Ny abidy samaritana, raha ny marina, dia abjady, izany hoe abidy tsy ahitana afa-tsy renisoratra ary tsy anoratana afa-tsy ny renifeo, sahala aminireo abidy hafa ampiasaina hanoratana ny fiteny semitika. Ahitana tarehin-tsoratra miisa 22 ao aminio abidy io, ka ny tarehin-tsoratra tsirairay afaka atao tarehimarika koa. Avy ankavanana miankavia ny fanoratana. Ny abidy samaritana dia karazanny abidy hebreo tranainy, izay avy aminny abidy fenisiana. Io abidy hebreo tranainy io dia e ...
Ny abidy sirilika dia abidy slavy. Ankehitriny izy io dia ampiasaina aminny fanoratana ny fiteny rosiana, okrainiana, belarosiana, rosina, biolgara, masedôniana ary ny fiteny serba-krôata. Io abidy io koa dia abidy voaterinny Firaisana Sovietika ampiasain ny fiteny tsy slava toa ireo teny tao Kaokazy sy Siberia ary ny faritra avaratr i Rosia. Ny abidy sirilika dia noforonin i Ohrid sy i Clément tamin ny taonjato faha-9, izay nampianarin ny moanina na monka roa, dia i Kyrillos sy i Methodios. Ny fototr io abidy io dia ny abidy grika. Ny soratra glagôlitika no nampiasaina talohan ny abidy si ...
ⓘ Abidy malagasy
Ny abidy malagasy dia abidy ampaisaina rehefa manoratra amin ny fiteny malagasy. Io abidy io dia avy amin ny abidy latina, ampiasaina amin ny fanoratana ny ankabeazan ny fiteny, tsy ao Eorôpa ihany, fa aty Afrika sy any Amerika koa.
Ny abidy malagasy dia abidy noforonin-dRadama I tamin ny 23-26 Martsa 1823, natao ho solon ny sorabe soratra miendrika arabo ampiasain ny fiteny any atsimo-atsinanani Madagasikara, indrindra ny fiteny antemoro. Ny abidy malagasy dia manana litera 21. Ny abidy noforonin-dRadama dia tsy mampiasa ny litera c, sy q, sy u, sy w ary x.
1.1. Ny fivoaran ny abidy malagasy Ny abidy malagasy vaovao 2001
2. Jereo koa
Ny fivoaranny abidia malagasy
Andriamihaja Solonavalona, Mianatra mamaky teny sy manoratra sy mianatra manisa. Akademia malagasy
Wikipedia: Abidy malagasy